ဒေါ်လာသန်းချီတန် ပန်းချီကား ၉ ခု - ONE DAILY MEDIA
အနုပညာဟာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရာများထဲမှ တစ်ခုသာမကဘဲ အလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ ပန်းချီကားတစ်ချပ်၏စျေးနှုန်းဖြင့် အိမ်ကြီးတစ်လုံး သို့မဟုတ် ခေတ်ဟောင်းကားတစ်စီးကို ဝယ်နိုင်မည်ဟု စိတ်ကူးကြည့်ပါ။
ထို့ကြောင့် အလွန်စျေးကြီးသော ပန်းချီကားများစာရင်းကို စုစည်းပြီး ဒေါ်လာသန်းနှစ်ဆယ်ကျော်ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဘယ်အရာရနိုင်သည်ကို ကြည့်ရှုရန် ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
9. Jeanne (Spring)၊ Edouard Manet၊ ဒေါ်လာ ၆၉.၄ သန်း
ပြင်သစ်ပန်းချီဆရာ Edouard Manet မှ Jeanne (Spring) ကို 1881 တွင် ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။။ ၎င်းသည် quadriptych ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း ပန်းချီဆရာသည် ပရောဂျက်၏ တစ်ဝက်မျှသာ ပြီးစီးချိန် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
သင့်တွင် ဤငွေပမာဏရှိပါက ၎င်းအစား ဘာကိုဝယ်နိုင်မည်နည်း? ကောင်းပြီ၊ ဒေါ်လာ ၅၂ သန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့သည့် ခေတ်ဟောင်း 1963 Ferrari 250 GTO တစ်စီးရနိုင်ပါတယ် ။ဒါဟာ ရောင်းဖူးသမျှထဲ ဈေးအကြီးဆုံးကားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
8. နေကြာ(၁၅)ပွင့်ပါသော ပန်းအိုး၊ Vincent van Gogh ၊‌ ဒေါ်လာ 88.1 သန်း
နေကြာပန်းများ ၁၅ပွင့် ပါသော ပန်းအိုးပုံ အခြားပန်းချီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ ဗားရှင်း7ခု ရှိပြီး အားလုံးမှာ အရောင်များနှင့် အရေအတွက် ကွဲပြားပါတယ်။
2017 ခုနှစ်တွင် ဟောင်ကောင်လေလံပွဲ၌ ပြသခဲ့သည့် Pink Star စိန်သည် စျေးအကြီးဆုံးစိန်အဖြစ်ပါတယ်။ ဤ 59.60 ကာရက် ပန်းရောင်ကျောက်မျက်ကို ဒေါ်လာ 71.2 သန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
7. Le Bassin aux Nymphéas၊ Claude Monet၊ ဒေါ်လာ ၉၄.၂ သန်း
The Water Lily Pond သည် ပန်းချီကားပေါင်း ၂၅၀ ခန့်ရှိသည့် Claude Monet ၏ ပန်းချီကားများထဲမှ တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
vampire ဒဏ္ဍာရီများကို နှစ်သက်ပါက ဒေါ်လာ သန်း 90 ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သော Dracula ရဲတိုက်ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ အဆောက်အဦ၏အမည်ရင်းမှာ Bran Castle ဖြစ်ပြီး ၁၃၈၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်များအကြောင်း သေချာမသိသော်လည်း စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်ဖြင့်ပင် ဤနေရာက သင့်ကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားစေသည်မှာ သေချာပါတယ်။
6. The Scream၊ Edvard Munch၊ ဒေါ်လာ သန်း ၁၃၀
Edvard Munch ၏ Scream ဟာ အလွန်ရေပန်းစားပြီး လူတိုင်းက ၎င်းတို့၏ တစ်သက်တွင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် မြင်ဖူးလိုကြမည့်အကြောင်း ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ 2012 ခုနှစ်တွင် ရောင်းချသောအခါ ဤပန်းချီကားသည် တန်ဖိုးအကြီးဆုံးပန်းချီကားအတွက် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးသွားခဲ့ပါတယ်။
$118.7 သန်းဟာ သင့်အား 2020 ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် PJ World Explorer စူပါရွက်လှေကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
5. Portrait of Adele Bloch-Bauer I , Gustav Klimt ၊ ဒေါ်လာ 168.8 သန်း
ဤလက်ရာ၏နောက်ထပ်အမည်ဖြစ်သည့် The Lady in Gold မှာ ရှုပ်ထွေးသောသမိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ခိုးယူခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ Bloch-Bauer မိသားစုထံ ပြန်မရခဲ့ပါဘူး။ ၎င်းကို ချက်ချင်းနီးပါး ရောင်းချခဲ့ပါတယ် ။
ဒေါ်လာ 168.8 သန်းဖြင့် ခမ်းနားထည်ဝါသော Palazzo di Amore ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဤဒေါ်လာ 129 သန်းတန်အိမ်ကြီးဟာ ကိုယ်ပိုင် spa ၊ ရေကူးကန်များ၊ စပျစ်ခြံများနှင့် ရေတံခွန်များပါရှိသည့် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
4. Maerten Soolmans နှင့် Oopjen Coppit၊ Rembrandt တို့၏ ဆွဲသီးပုံများ , ဒေါ်လာ ၁၉၁ သန်း
သူတို့စုံတွဲ၏မင်္ဂလာပွဲအတွက် ထိုပုံကို ၁၆၃၄ ခုနှစ်တွင် ဆွဲခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နှင့် နယ်သာလန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ခွဲခြားမထားခြင်းက ပိုကောင်းသည်ဟု နှစ်ဖက်စလုံးက သဘောတူထားကြသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် Rijksmuseum နှင့် Louvre ကြားတွင် အမြဲလည်ပတ်ခရီးသွားနေပါတယ်။
ဒေါ်လာ 191 သန်းဖြင့် သင်သည် Skorpios ကျွန်းကို ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Onassis မိသားစုမှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ရောင်းရန်မဟုတ်သော်လည်း အမျိုးမျိုးသော ကောလာဟလများရှိ‌ပါတယ်။ ထိုအထဲမှ တစ်ခုမှာ Giorgio Armani က အဆိုပါ
ကျွန်းကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၉၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
3. Nafea Faa Ipoipo , Paul Gauguin၊ ဒေါ်လာ ၂၂၃ သန်း
ပန်းချီကား၏အမည်ကို “ဘယ်တော့လက်ထပ်မှာလဲ” ဟု ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ၎င်းကို 1892 တွင် ဖန်တီးခဲ့ပြီး စျေးနှုန်းက ဒေါ်လာသန်း 300 ဖြစ်မည်ဟု ကနဦးယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း ကောလဟာလများသာဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်သည် ဘောလုံးဝါသနာရှင်ဖြစ်ပါက၊ ဤရွေးချယ်မှုကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒေါ်လာ 222 သန်းဖြင့် သင်သည် ဘောလုံးကစားသမားတစ်ဦးကို အမှန်တကယ် ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ စျေးအကြီးဆုံးဘောလုံးအပြောင်းအရွှေ့များစာရင်းအရ 2017 ခုနှစ်တွင် Paris Saint-Germain သည် Neymar အား ရရှိရန် Barcelona အား ဤပမာဏအတိအကျကို ပေးချေခဲ့ပါတယ်။
2. The Card Players, Paul Cézanne, ဒေါ်လာ သန်း ၂၈၀
The Card Players ဟာ Cézanne ပန်းချီကား ၅ ကားထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ကာတာပြည်နယ်တွင် 2011 ခုနှစ်က ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လာ သန်း 260 ဖြင့် ဟာဝိုင်အီ တစ်ပိုင်းကို သင်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ Molokai Ranch သည် အမည်တူ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ကျွန်း၏ 35% ပါဝင်ပါတယ်။ Business Insider ၏ အဆိုအရ၊ ဤဝယ်ယူမှုသည် ဝယ်ယူသူအား ပြည်တွင်းမြေပိုင်ရှင် ၅ ဦးအနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်လာစေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
1. Salvator Mundi၊ Leonardo da Vinci၊ ဒေါ်လာ ၄၆၃ သန်း
Leonardo da Vinci ၏ ဤပန်းချီကားဟာသလက်ရှိစံချိန်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ပန်းချီကားဖြစ်ပါတယ်။
သင့်တွင် အပိုငွေအနည်းငယ်ရှိပြီး ဇိမ်ခံဘဝတစ်ခုကို လိုချင်ပါက Monaco ရှိ Tour Odéon penthouse ကို ဒေါ်လာ 335 သန်းမှ $400 သန်းကြားတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမြင်ကွင်းမျိုးများလဲ ??
Bonus – Mona Lisa၊ Leonardo da Vinci
မိုနာလီဆာသည် ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး ပန်းချီကားဖြစ်ပါတယ် ။ 1911 ခိုးယူမှုတစ်ခု မဖြစ်ခဲ့ပါက ၎င်းသည် များစွာ ကျော်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ Louvre အလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် Vincenzo Peruggia က အဆိုပါလက်ရာသည် အီတလီပိုင်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ပါတယ်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ 2018 တွင် ပန်းချီကား၏တန်ဖိုးမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၈၃၀ သန်းရှိမည်ဟု ယုံကြည်ရပါတယ်။ သို့သော် အချို့သော ပညာရှင်များက သဘောမတူပါဘူး။
2014 တွင် France 24 က ဒေါ်လာတစ်ဘီလယံနီးပါး ကုန်ကျနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။.
ဤငွေများစွာက သင့်အား အရာများစွာကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း‌မျိုးလား ? ဥပမာ၊ Seattle Center Arena ပရောဂျက်အသစ်ဟာ ဒေါ်လာ ၈၅၀ သန်းကုန်ကျမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
သင် မတန်တဆ အလွန်ချမ်းသာနေပါက အနုပညာလက်ရာတစ်ခုအတွက် သန်းပေါင်းများစွာ ပေးချေမည်လား ?? သင်ကိုယ်တိုင် ဇိမ်ခံအိမ်တစ်လုံးကို သင်ဝယ်နိုင်ပါသလား။ သင့်အကြံဉာဏ်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်မိခင်များက သားသမီးများကို တွန်းလှည်းများအစား ကိုယ်နှင့်မကွာ ချီရတာကို အဘယ်ကြောင့် နှစ်သက်ကြသလဲ